Firaketana fifandraisana amin'ny daholobe | Agence PR & Marketing | Fifandraisam-bahoaka TOC
ny podcast mampiseho ny TOC
Biraon'ny Sheriff County San Joaquin
Sampan-draharahan'ny polisy Rialto
Mpanara-maso Curt Hagman
Salama, fifandraisana amin'ny fiaraha-monina TOC izahay
Manolotra ny fifandraisana amin'ny daholobe, ny marketing nomerika ary ny vahaolana amin'ny fifandraisana stratejika izahay miaraka amin'ny valiny voaporofo.
Mpanamboatra marika sy mpiresaka tantara
Ao amin'ny fiaraha-monina ankehitriny, ny fananganana fahatokisana ampahibemaso sy fihazonana endrika matihanina dia iray amin'ireo lahasa lehibe indrindra aminao. Tsy ny hafatra ara-potoana sy mangarahara ihany no tena ilaina amin'ny fanatanterahana izany, fa nanjary fanantenana ihany koa. Aza avela ny hafa hamorona ny lazanao ary hitantara ny tantaranao ho anao.
Fomba iray mampiditra amin'ny alàlan'ny bilaogy, newsletter, famolavolana sary, ary serivisy sary / horonan-tsary matihanina.
Mamolavola sary iray izay mifanaraka amin'ny olona rehefa mahita ny marika amantarana ny fikambanana na ny orinasanao.
Ny tranonkala tokana misy marika manokana sy matihanina dia fitaovana marketing mahomby ary vavahady ho an'ny mpanjifa mety.
Ahoana no ahafahanay manampy anao
Tsy manao fototra isika
Raha mitady fomba mirindra sy mitovy habe amin'ny marikao sy marketing ianao, dia tsy mifanentana tsara izahay. Ao amin'ny TOC Public Relations, fantatray fa tsy ny fikambanana rehetra no mitovy, koa tsy ho toy izany koa ny paikadim-barotrao. Ny ekipanay dia fantatra amin'ny fanosehana fetra sy fanakorontanana ny fanao. Raha tsy mampatahotra anao izany dia avelao tộc.
Taona niainana mitambatra
Ny dingana 4
Ny mpanjifa tsirairay dia manombana sy manombatombana mba hamolavolana paikady manokana mifanaraka amin'ny filan'izy ireo.
Mamolavola drafitra izay mamaritra ny tanjona manokana sy ny fizotry ny paikady marketing nomerika an'ny mpanjifa.
Eo no ampiharantsika ny paikadim-pifandraisana sy ny marketing nomerika.
Fanampiana amin'ny antso
Hanara-maso ny fandrosoana sy ny valin'ny tetikadinao izahay hahazoana antoka fa hahatratra ny tanjontsika.
Mpanelanelana amin'ny serivisy ho an'ny serivisy ho an'ny serivisy feno, serivisy nomerika ary serasera stratejika izahay. Manana traikefa mitambatra mihoatra ny 100 taona izahay miaraka amin'ny lafiny samihafa amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe, manoro hevitra ireo mpanjifantsika mifototra amin'ny fahalalana sy fahitana voalohany. Mahazo fahalalana akaiky momba ny indostrian'ny mpanjifanay izahay ary mampiasa fomba mivantana hanatanterahana ny paikadim-barotra. Tahaka ny fanananao ny ekipa PR anao manokana.
Raiso ny farany avy amin'ny TOC Public Relations
Misoratra anarana amin'ny mailakao ve ianao? Mampanantena izahay fa tsy hanenenanao izany.
Misaotra anao nisoratra anarana!
Chief Mark Kling, Departemantan'ny polisy Rialto
Tena nahagaga ny fiaraha-miasa amin'ny TOC Public Relations hanovana tanteraka ny serasera sy ny sary an-tserasera. Noho ny fiavian'i Tamrin mpampihatra lalàna dia azony tsara izay tena ilaintsika hanatanterahana ny iraka ataontsika.
Mpisolovava Tristan Pelayes, ireo biraon'ny lalàna any Pelayes & Yu
Raha resaka fifandraisana amin'ny besinimaro dia ny TOC PR no mivoaka tsara indrindra. Manomboka amin'ny famoahana vaovao ka hatrany amin'ny media sosialy sy valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety dia fantatr'izy ireo ny fomba fampiroboroboana anao tsara.
Alex Weinberger, tompona orinasa
Tiako ny afaka milaza amin'ny TOC Public Relations ny fahitako ho an'ny orinasako ary fantatr'izy ireo tsara izay hatao mba hanatanterahana azy tsy misy kilema. Izy ireo no miahy ny varotra sy ny mariko mba hahafahako mifantoka amin'ireo mpanjifako.
Ataovy eo amin'ny toerany ny paikadim-barotra
Vonona izahay hanompo anao
Jereo daholo ny mpikambana ao amin'ny ekipa
Tompony & Tale Jeneraly
Mpamorona atiny fitarihana
Mamorona ny maha-izy anao amin'ny alàlan'ny marika amin'ny alàlan'ny fanarahana ireto torohevitra dimy ireto
Fifandraisam-bahoaka TOC|Sep 11, 2021| Marketing amin'ny orinasa, Marketing ankapobeny
Ny paikady marika no singa tokana manan-danja indrindra amin'ny fananganana sy fitazonana orinasa mahomby. Avy amin'ny ...
Ora sy andro amin'ny herinandro ireto hisorohana ny fandefasana amin'ny Instagram
Fifandraisam-bahoaka TOC|Aug 31, 2021| Social Media Marketing
Mihainoa ireo manampahaizana manokana momba ny haino aman-jery sosialy! Amin'ny maha matihanina eo an-tsaha antsika dia samy mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny ...
Tombony dimy farany amin'ny LinkedIn ho an'ny orinasa, fikambanana ary masoivoho
Fifandraisam-bahoaka TOC|Jul 26, 2021| Marketing, Social Media Marketing
Betsaka ny tombontsoa azon'ny piraofilina LinkedIn omena orinasa, iray manamafy ny fahatokisana ny ...
Jereo ny lahatsoratra rehetra
Ireo mpiara-miasa amintsika
Mpiara-miasa tiana kokoa
Tombony ara-barotra amin'ny sehatra ara-panjakana
Fanambarana momba ny fahazoana miditra
Fanamafisana ny lalàna ara-tsosialy
Tohizo hatrany ny daty
© 2021 TOC Fifandraisana amin'ny besinimaro. Zo rehetra voatokana.
Website Powered by Fifandraisam-bahoaka TOC
manantona ny lisitry ny mailaka anay
Raiso ny vaovao farany sy ny fanavaozana avy amin'ny ekipanay mankany amin'ny boaty fampidirana anao!
Hihaona amin'ny ekipanay
Biraon'ny Sheriff County San Joaquin
Sampan-draharahan'ny polisy Rialto
Mpanara-maso Curt Hagman